Asụsụ English - Ụlọ akwụkwọ asụsụ Central, Cambridge
Ụlọ akwụkwọ Central Language na-enye Gọọmenti Bekee, Ọmụmụ Igwe Na-ahụ Ike, Oge Nyocha na Nyocha. Enwere ike ịchọta ozi na ihe ọmụmụ ndị a site na iji menu nri.
Anyị na-anabata ụmụ akwụkwọ kwa afọ ma na-emechi naanị oge Krismas.
Usoro gị na Usoro oge gị
Usoro gị nwere ike ịdabere na ọkwa gị, ya mere, anyị na-enye gị nyocha nyocha ebe ị ga-abata. I nwekwara ike were Nyocha nke Cambridge English, nke ga-agwa gị nke nyocha ị nwere ike ịkwadebe maka. Nke a bụ naanị onye nduzi, ya mere, anyị ga-enye gị ndụmọdụ mgbe ị na-eme ihe.
Anyị na-akpọ ọmụmụ ihe oge niile General English (Akwụkwọ 15 awa kwa izu) ma ọ bụ Igwe Igwe ọkụ (Akwụkwọ 21 awa kwa izu). A na - enweta ihe mmụta kwa ụbọchị site na Monday ruo Friday, 09: 30 ruo 13: 00 na kọfị kọfị na 11: 00. Ọ bụrụ na ị họrọ Igwe Igwe ọkụ na-enwekwa ọmụmụ na Tuesday, Wednesday na Tọzdee ehihie n'agbata 14: 00-16: 00.
Anyị na-enyekwa ụfọdụ oge dị iche iche nke oge-oge: n'oge ọ bụla n'afọ ị nwere ike ịmụ ihe na anyị N'ehihie ụtụtụ, nke bụ ehihie nke akụkụ Bekee na-esi ike, dịka n'elu. N'oge ụfọdụ n'afọ, anyị na-enye oge oge Ụzọ mmalite ụtụtụ na Tuesday, Wednesday na Thursday site na 09: 30 ka 11.00.
E nwere ọrụ ehihie ma ọ bụ ihe omume nke mgbede maka onye ọ bụla n'ime ụmụ akwụkwọ anyị, na-enye mmezi omume ọzọ n'asụsụ Bekee.
Ị nwere ike ịmalite na Monday ọ bụla (ma e wezụga ezumike ọha na eze) maka opekempe otu izu. Imirikiti ụmụ akwụkwọ na-amụ izu izu 4-12. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-amụ ihe ruo otu afọ. Anyị nwere ike ịkwado gị ogologo oge dị mkpa iji nweta ihe mgbaru ọsọ dị iche iche.
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu bụ 10, mana ọ bụ n'etiti ụmụ akwụkwọ 5 na 7 kwa otu. Mgbe ị rutere n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-eme nyocha nhazi maka nyochaa ọkwa gị. Mgbe ahụ, a ga-etinye gị na klaasị dịka ọkwa ogo gị, ikike ikwu okwu na atụmatụ onwe gị. Iji akwukwo akwukwo di iche iche gi g'enyocha Bekee site na otutu isiokwu di iche iche na itinye uche na nkwurita okwu. Nke a na-agụnye ọrụ-arụ ọrụ, nkwurịta okwu na ịrụ ọrụ. Ị ga-enwe ohere iji gbasaa okwu gị ma dozie ihe ọmụma gị banyere ụtọ asụsụ.
Ụdị Nzuzo General bụ 15 awa kwa izu kwa ụtụtụ na-amalite na 09: 30 ma gwụ na 13: 00 na...	GỤKWUO
Ndị na-achọ ịmụtakwu oge ịmụta asụsụ Bekee nwere ike idebanye na English English (21 awa n'izu)....	GỤKWUO
OKWỤKWỤKWỌ N'ỤLỌ NCHE Ị nwere ike ịmalite ụtụtụ Saturday mgbe ọ bụla Tuesday mgbe ị nyochachara ule. N'uhuruchi...	GỤKWUO
Ndị nkuzi gị ga-adụ gị ọdụ maka ule kachasị mma maka gị. I nwekwara ike ile ule Bekee Cambridge. ka...	GỤKWUO
Download broshuọ anyị
Lee broshuọ anyị - pịa ka ibudata